#SaturdayAM Manangana Gazety Sabotsy Brunch, Mankalaza ny Mpamorona Vehivavy & LGBTQ! - Hafa
#SaturdayAM Manangana Gazety Sabotsy Brunch, Mankalaza ny Mpamorona Vehivavy & LGBTQ!
MyFutprint Entertainment, LLC dia reharehany amin'ny fandefasana ny Saturday BRUNCH, ny fiverenana manaraka ao anatin'ireo andiany an-gazety antholojia nomerika isan-karazany.
Miaraka amin'ny marika shonen misy azy ireo, Sabotsy AM, rehefa niampita olana 120 nisesy taorian'ny fanombohana ny taona 2013, ny MyFutprint dia mitohy mandresy ny tantara an-tsary miora manga.
Sabotsy zoma dia ny magazina JOSI vaovao-aingam-panahy miresaka amin'ny mpamaky vehivavy efa antitra ary koa ireo izay manondro ny LGBTQ +.
Ny anthology dia hanasongadina lahatsoratra sy resadresaka ifanaovana amin'ireo marika malaza sy mpamorona toa an'i YURIMOTHER rehefa handefa ity Fahalavoana ity ny magazine.
Olana manokana iray amin'ny Zero amin'ny Asabotsy Brunch mandritra ny PRIDE MONTH ary ny mpamaky dia nitazana ny roa tamin'ireo andiany manokana ho avy izay ho voarindra:
SPIRIT PIZZA avy amin'ny mpanakanto Instagram, @DAGGERSTARFIGHTER dia manolotra tantaram-pitiavana momba tovovavy tanora mainty hoditra iray New Yorker izay tena niasa mafy tao amin'ny trano fisakafoanana Pizza izay eo alohan'ilay andiana DEMON HUNTING.
HENSHIN! avy amin'ny mpanakanto Instagram @IAMBONIDLE dia manolotra fomba vaovao hiseho amin'ny tranga SENTAI miaraka amin'ny maherifo gay anglisy antsoina hoe Alex izay sahy niditra an-tsehatra tamin'ny asan'ny maherifo miady amin'ny Superhero.
'Ny teny dia tsy afaka maneho ny hafaliantsika amin'ny fandefasana ny Magazine Brunch Saturday,' hoy i Frederick L. Jones, mpanorina sy mpanonta ny MyFutprint Entertainment.
“Amin'ny alàlan'ny fitondrana mpamorona maro isan-karazany any amin'ny fanbase manerantany misy ny tena sarin'ireo maherifo vavy sy / na mahery vaika, olon-dratsy , na mpandray anjara mavitrika amin'ny tantara tsy manam-paharoa tahaka ny tarehin-tsoratra. '
Mitadiava Saturday Brunch ary koa Saturday Saturday, Saturday PM, ary fananana manga maro samihafa avy amin'ny app MyFutprint Entertainment, SATURDAY AM - GLOBAL COMICS vaovao ho an'ny fitaovana Android sy Apple.
Azo alaina maimaim-poana.
SPIRIT PIZZA dia iray amin'ireo andian-tantara vaovao andrasana indrindra amin'ny RUN amin'ny vaovao #diverse #josei & #lgbtq #sleeve #comics anthology, @saturdaybrunch_ . #fanart ny @fongfumaster . VAKIO AZY MAIMAIMPOANA - https://t.co/eDsdivZbf1 pic.twitter.com/mumCDh1Xmu
- Sabotsy BRUNCH (@saturdaybrunch_) 10 Jolay 2020
Q & Resadresaka nifanaovana tamin'ny mpanangana Geek rehetra (Podcast Filter Filter)
Asabotsy AM Miaramiasa Amin'ny marika StreetWear Ho an'ny #BlackLivesMatter
anime tsara indrindra amin'ny fandatsaham-bato rehetra